Sunny Deol 'oo lagu baafinayo Hindiya' - BBC News Somali
Sunny Deol 'oo lagu baafinayo Hindiya'
Image caption Sunny Deol
Qoraal uu micnihiisu yahay "Waxaa la raadinayaa xildhibaan Sunny Deol oo maqan" ayaa lagu qoray warqadaha, wuxuuna isugu jiray luuqadaha hindiga iyo ingiriiska.
"Waxaan maqlay in dadka siyaasiyiinta ah ee iga soo horjeeda ay ka hadlayaan wax aan micno lahayn oo aniga igu saabsan. Kaliya waxaan rabaa inaan u sheego in waxaasi aysan shaqadooda ahayn, anigana aysan shaqadeyda ahayn. Waxaa loo baahnaa inay faraxsanaadaan. Waxaan u sheegayaa inay dadka u shaqeeyaan, maadaama aan kulligeen halkan u joogno inaan shacabka u adeegno", ayuu yiri Sunny Deol.
"Waxaan doonayaa inaan dadweynaha u sheego in kalsoonida ay ii muujiyeen ay ii noqotay awood, waana sii wadan doonaa shaqadeyda. Mustaqbalka waxaan heli doonaa shaqooyin intan ka sii waaweyn, sababtoo ah kalsoonidiinna ayaa ila jirta", ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Inta aysan sheekadan baafinta ah soo ifbixin ka hor, xildhibaankan jilaaga ah waxaa bishii July ee sanadkii lasoo dhaafay lagu eedeeyay inuu qof wakiil ah u sameystay "ka qeyb galista shirarka iyo arrimaha muhiimka ah", kaasoo ku matala kalfadhiyada baarlamaanka.
Laakiin markii uu ka fal celinayay wuxuu eedeyntaas ku tilmaamay mid "nasiib darro weyn ah".
Image caption Sunny Deol iyo aabihiis Dharmendra ayaa xubno ka noqday baarlamaanka
Afhayeenka aqalka wakiillada ee Hindiya, Manish Tewari, oo ka faa'iideysanaya warqadaha baafinta ah ee laga sameeyay Sunny Deol ayaa isagana hadlay.
"Ma aha arrin lama filaan ah oo lala yaabo, waa wax horay ugu dhacay aabihiis Dharmendra, oo xildhibaan ka ahaa Bikaner. Magaalada Gurdaspur waxay nasiib u yeelan weysay nin fiican oo xilkaas ugu tartamayay, oo ah Sunil Kjakhar", ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
"Intii u dhaxeysay 24-kii bishii May, 2019 ilaa 31-kii bishii December, 222 maalmood oo sanadka ka mid ah waxaan degmadeyda joogay 100 maalmood, waxaan si joogto ah uga qeyb galayay kulamada baarlamaanka xilliyadii kala duwanaa. Laakiin meeqa maalmood ayuu Sunny Deol joogay degmadiisa ama aqalka baarlamaanka???", ayuu ku yiri qoraalkiisa.